I-china Thermal gel ukufudumeza ikepusi mveliso kunye nabenzi | Huanyi
Izinto: Ilaphu le-satin edityanisiweyo yengubo yePVC
Ubukhulu: 47cm ububanzi, 600g
Umbala: pinki rhoqo, umbala ungenziwa ngemfuneko ukuba ubungakanani phezu 2000pcs
Ukusetyenziswa: Emva kokuhlamba ishampu, gcoba i-cream yokubhaka ngokulinganayo, nxiba ikepusi yokuhlambela, kwaye shushu ikepusi yokubhaka kubushushu obuphakathi kwi-microwave kangangemizuzu engama-2-3. Xa iqondo lobushushu limalunga nama-35-45 degrees, linxibe malunga nemizuzu eli-15. Ilungele imvume, ukukhathalelwa emva kwedayi, kunye nokugcinwa komgangatho weenwele mihla le.
Ukusetyenziswa:Emva kokuhlamba ishampu, gcoba i-cream yokubhaka ngokulinganayo, nxiba ikepusi yokuhlambela, kwaye shushu ikepusi yokubhaka kubushushu obuphakathi kwi-microwave kangangemizuzu engama-2-3. Xa iqondo lobushushu limalunga nama-35-45 degrees, linxibe malunga nemizuzu eli-15. Ilungele imvume, ukukhathalelwa emva kwedayi, kunye nokugcinwa komgangatho weenwele mihla le.
1. Iminyaka eli-10 yamava e-OEM, i-ODM, umbala oCwangcisiweyo, ilogo, iipakeji. Ngaba unokukunika iingcebiso zobungcali ngokusetyenziswa kunye nokugcinwa, ukunqanda ukuvuza okanye ukungunda.
2.Umveliso unemigca yemveliso engaphezulu kwama-20, umatshini wokushicilela we-UV, umasifundisane weSilkscreen unokuhlangabezana neemfuno zakho kwilogo, sikwenza ngokwesiko ibhegi yomsebenzi ngokwethu sinokupakisha umnqwazi wakho ngokucacileyo.
Kuba ezo gel ikepusi shushu ubungakanani amancinci ukuze tight kakhulu yenza ungakhululeki, efektri yethu babe ezahlukeneyo ngobukhulu ezahlukeneyo ukukhetha kwakho, uyakwazi ukulingana abantu abaninzi.
Egqithileyo Umvelisi weePakethe zeMkhenkce emva koKuzalwa- abantwana ipakethe yomkhenkce-uHuanyi
Okulandelayo: Igxalaba lokugoqa ipakethe yomkhenkce
Ukubeka Ubushushu Cap
Imeko enzulu yoBushushu beCape
Ikepusi yemvume yeenwele
ikepusi yokujija iinwele
Ubushushu Gel Cap
ikepusi yokulala iinwele
Ikepusi yejel eshushu
I-gel eshushu ishushu ikepusi